အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: March 2012
ဒီမိုဝေယံ: အရောင်ပြောင်းသော လူလည်ကြီးများ အပိုင်း(၄) Max Mya...
ဒီမိုဝေယံ: အရောင်ပြောင်းသော လူလည်ကြီးများ အပိုင်း(၄) Max Mya...: အရောင်ပြောင်းသော လူလည်ကြီးများ အပိုင်း(၄) ဖေဖေနဲ့ မေမေကို မွေးစားနိုင်သူ (သို့မဟုတ်) လှေနံနှစ်ဖက်နင်းထားတဲ့ Max Myanmar ဦးဇော်ဇော် (ဆောင်း...
ဒီမိုဝေယံ: ဒီပဲယင်း တရားခံ စက်မှု(၁) ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ...
ဒီမိုဝေယံ: ဒီပဲယင်း တရားခံ စက်မှု(၁) ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ ...: ဓာတ်ပုံကတော့ ယခင်စက်မှု(၁) ဝန်ကြီး ဦးအောင်တောင်းနဲ့ လက်ချင်းချိတ်နေတဲ့ တရုတ် စက်မှုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စက်မှု(၁)ဝန်ကြီး အောင်သောင်း နေထိုင်တဲ့ ...
Posted by Wai Lin Aung at 8:09 AM
ဒီမိုဝေယံ: သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထ...
ဒီမိုဝေယံ: သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထ...: ၂၆-၃-၂၀၁၂ နေ့က သီလဝါ မီးလောင်မှု မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံ China News မ ရှုပ်လို့ မီး ရှို့လိုက်ရတဲ့ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း အရှုပ်တော်ပုံအပိုင်း (၁) ပ...
Posted by Wai Lin Aung at 7:58 AM
Posted by Wai Lin Aung at 9:06 AM
တပ်ခွဲမှူးအရာရှိ။ ။ ”အေး..မင်းကိုခေါ်လိုက်ရတာ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ကွ။ ပထမနှစ်ဗိုလ်လောင်းမောင်မောင်ရဲ့
အဖေ ဒီနေ့ဆုံးတယ်လို့ ကြေးနန်းဝင်လာတယ်။ အဲဒါ ပထမနှစ်ဗိုလ်လောင်းလည်း ၀မ်းမနည်းရအောင်၊ စိတ်ထိခိုက်မှု
မရှိအောင် သွယ်ဝိုက်ပြီး ပြောလိုက်ကွာ..”
ဗိုလ်လောင်းတာဝန်ကျ။ ။ ”ပထမနှစ်တွေအားလုံး တစ်ယောက်တန်း တန်းစီ.....ပထမနှစ်တွေ လူစုံပြီလား..”
Posted by Wai Lin Aung at 8:33 AM
ဒီမိုဝေယံ: သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင် ကြံခိုင်ရေးအတွက် သုံ...
ဒီမိုဝေယံ: သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင် ကြံခိုင်ရေးအတွက် သုံ...: သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင် ကြံခိုင်ရေးအတွက် သုံးခွမြို့နယ် ကတုံးပေါ် အထက်ကျေးရွာတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးနည်း အသစ်များဖြင့် ကတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်စည်...
Posted by Wai Lin Aung at 8:26 AM
မပြောချင်ဘူးဗျာ။ လုံးဝမပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ပြောရအုံး။ မပြောမပြီး မတီးမမြည်လို့ ဆိုထားတယ်မဟုတ်လား။ ပြောမှသိ ထိမှနာ ကြမှာ ။ မပြော ရင် မပြင် ပြောမှ ပြင်ကြမယ် မဟုတ်လား။ ပြောရရင် လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်းထောင်းသလိုပါပဲဗျို့ ။
မြန်မာတွေ စည်းကမ်းဖောက် လို့ ထီးနန်းပျောက် ဖြစ်ပြီ မှီငြမ်းထောက်အသစ်မှီ သည် ညစ်ပလီလူမျိုး လို့ ရေးတဲ့ အချုပ်တန်းဆရာဖေ ရဲ့ လေ အရ ဆိုရင်
တွေးမိတိုင်း အရိုး မှာနာသည် အမျိုးပါ ဆဲချင်ပေါ့လေး ဟု သာ ဆိုချင်ပါသည်။
လက်တို့ပြီးတော့ ပြောရအုံးမယ် ပြောလိုက်တော့ ပြောလိုက်တော့ဗျို့။
လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ကျော်ခန့် က ဖြစ်ပါသည်။ ဖရန့်စစ်ဖူကူယားမားရေးသော State Building ကို ဖတ်ဖြစ်သည်။ ဆရာကျော်ဝင်း ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်။ Institutionalization ( အသင်းအဖွဲ ပြု ခြင်း) ကိ်ုဆောင်ရွက် လျှင် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည် ။ ဆရာ အလို နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး။ နိုင်ငံတစ်ကာ ပညာရှင်များလည်း သည်အတိုင်းလက်ခံသည်။
နိုင်ငံတော် ကို ကောင်းအောင် တည်ဆောက်ချင်သူ အတွက် သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါလော။
သင်းဖွဲ့ စည်းမျည်း သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်း ကို ၀ိုင်းဝန်းရေးဆွဲကြသည် ။ ဥကဌ အတွင်းရေးမှူး အသင်းသား စာရင်းကိုင် စာရင်းစစ် စသည်ဖြင့် အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့BOD ဖွဲ့သည်။နောက်ဆုံး တစ်လလျှင် တစ်သောင်းခွဲ စုစေလျှင် စုဆောင်းငွေ ၏ သုံးဆ ကိုချေးငွေ အဖြစ် သတ်မှတ် ပြီး ငွေတစ်ရာ ကို တစ်ကျပ် အတိုးနုန်းဖြင် သက်သက်သာသာ ချေးပေးသည်။ သည်လိုနှင့်
ငွေစု ငွေချေး အသင်းဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
အကြံရသည့်အတိုင်း လုပ်ဖြစ်သည်။ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ အဆင်ပြေ၏။အောင်မြင်ပါ၏။
တဖြည်းဖြည်း လူဦးရေ ငါးဆယ်ကျော် ဖြစ်လာသည်။လူတစ်ဦးလျှင် ခြောက်သိန်းအထိ ချေးပေးသည်။ တစ်ကျပ်တိုးနှင့် ချေးပေးသည်။ခြောက်သိန် ချေးလျှင် တစ် လ ခြောက်ထောင် အတိုး ပေးရသည် ။ ထိုကြောင့်
အသင်းဝင်ချင်သူများပြားလာသည်။ သိ်ု့သော် များများ လက်မခံနိုင်သေး။တရာဝင် အသင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ စိတ်ချရသူသာ အသင်းဝင်အဖြစ်လက်ခံသည်။ ဥပဒေ အရ ကာကွယ်စောင့်ရှောင့် နိုင်သည့် အခြေအနေမဟုတ်သေး။ ဥပဒေအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောင့် နိုင်လျှင် မည်သူ့ ကိုမဆို လက်ခံနိုင်သည်။ ယခု လူတိုင်းကို လက်ခံ နိုင်ခြင်းမရှိသေး။ တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ရန် လိုသည်။
ဆင်းရဲ့ နွမ်းပါးမှုပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ။ ငွေစုငွေချေးအသင်းအဖွဲ့များဆောင်ရွက်ရမည် ။ နိုင်ငံတော် သမတ က ပြည်သူလူထုကို တိုက်တွန်းသည်။
လွန်ခဲ့သည် သုံးလခန့် ကဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်း တစ်စောင် ကို ဖတ်ဖြစ်သည်။ သတင်းစာတွင် လည်းဖတ်ရသည်။ အသေးစား ငွေစုငွေချေး ဥပဒေ ဖြစ်သည် ။
လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော ငွေစုငွေချေးများ လုပ်ငန်းလိုင်စင် တင်ရမည်။ မတင်လျှင်ပယ်ဖျက်ရမည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည်။တရားမ၀င် အသင်းအဖြစ်မခံနိုင် ။ချေးငွေပေါင်း သိန်းရှစ်ဆယ်ကျော်သည်။ ပယ်ဖျက်ခံရလျှင် ဆုံးတော့မည်။
အသေးစားငွေစုငွေချေးကော်မတီသို့ ရောက်သည် ။ 36လမ်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဗှိုလ်မှူး ကိုကိုမောင် က လုပ်ငန်းလိုင်စင် တစ်လအတွင်း ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုသည်။ အကျိုးအမြတ် မယူသည် အသင်းအဖွဲ့ ဆှိုလျှင် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလက်မှတ်လိုသည်ဟု ညွှန်ကြားသည်။
ဒဂုံတောင်မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေမှူးထံရောက်သည်။ အသင်းအဖွဲ့  ဖွဲစည်းရန် စာတင် သည်။ ၀င်စာလက်ခံပေးခြင်းမရှိ။
၀င်စာနံပါတ်ပေးခြင်းကို ငြင်းဆို သည်။
အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး သည် ၀င်စာနံပါတ်ပေးခြင်း မရှိသည်မှာ အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး မိတ်ဆွေတစ်ဦး က ကြိုးစားပေးမည်ဟုဆိုသဖြင့် သူလက်ထဲ့ အပ်ခဲ့သည်။
သူလည်းကြိုးစားကြည့်ပြန်သည်။ မထူးခြားချေ။ ထပ်မံကြိုးစား ကြည့် ပြန်သည်။ ပိုင်ရာ ဆိုင်ရာနှင့်ဆောင်ရွက်လျှင်ရသည်ဟု ပြော သည်။ နောက်ဆုံး သတင်း တစ်ခု ရသည် ။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထောက်ခံလျှင် က မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ၀င်စာပေးမည်ဟုသိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တစ်လခန့် က ဖြစ်သည်
24ရပ်ကွက် ရုံး ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း သို့ သွားခဲ့သည် မှာ တစ်လပြည့်တော့မည်။
ဆယ်အိမ်မှူး ထောက်ခံ ချက် ရရန် သွားခဲ့သည်။မရခဲ့ချေ။ ရာအိမ်မှူးဆီ လွှတ်သည်။ မအောင်မြင်။ ရာအိမ်မှူး ။ ဆယ်အိမ်မှူး ဥကဌ စုံညီရှေ့ တွင် ထောက်ခံမည်ပြောပြန်သည်။ အားလုံးစုံ ညီသော အချိန်ရောက် အောင်သွားသည်။ မရခဲ့ချေ။ အားလုံးစုံညီရှိသောလည်း သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်းတောင်းပြန်သည် ။ တောင်းသည့် အတိုင်းသင်းဖွဲ့ စည်းမျည်း ကိုပေးသည် ထောက်ခံချက် မရခဲ့။
သည်လိုနှင့် ဟိုမှသည် သည်မှ ဟို တစ်ပတ် ထပ်မံ ကြာပြန်သည်။
တစ်လပြည့်ပြီ။ အသင်းအဖွဲ ဖွဲစည်းရန်မဆိုထားနှင့် ရပ်ကွက် မှ ထောက်ခံချက်ကို ပင်မရသေး ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ လျှက် ထောက်ခံပေးရန် မငြင်းဆိုသော်လည်း လက်တွေ့ တွင် ထောက်ခံချက်မရသေး။ အသင်းအဖွဲ့  တည်ရှိကြောင်းထောက်ခံ ချက်ရရန် နှင့် ပါတီကင်းရှင်းကြောင်း နောက်ထပ် ရဲစခန်းထောက်ခံချက် ပြစ်မှူကင်းရှင်ကြောင်း။
စသည့် လိုအပ်ချက်များရလျှင် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက် အမျိုးမျိုးကို ရရန်တောင်းသည်။
မြို့ နယ် ထွေအုပ်ထံတွင် ၀င်စာရရန် အလွန်ခက်ခဲလှပေတကား။
အသွင်သဏ္ဍန်ပြောင်းလဲသော်လည်း အနှစ်သာရ မပြောင်းသေး။ အုပ်ချူပ်သူ များမှ အနှစ်သာရ မပြောင်းလိုသဖြင့် လျိုဝှက် အမ်ိန့်ပေးကာ မပြောင်းခိုင်းသည်လော ။ သို့တည်းမဟုတ် အောက်ခြေက မပြောင်း လဲ လိုသလော မသိနိုင်။
အထက်ကပြောင်းဖို့ ကြိုးစားကြလေသည် ။ သို့မဟုတ် အောက်က မပြောင်းသေး။
အပေါ် အောက် ဟန်ချက်ညီစွာပြောင်းကြဖို့လိုသည် မဟုတ်ပါလော။
ဝေလင်းအောင် (ဒဂုံတောင်) 0943093591
နောက်ဆုံး သတင်းဖြစ်သည် ။ ကြေမုံ့ သတင်းစာ 12Aungust 2012 ရက်နေ့ ထုတ် ဟု ထင်သည်၊။ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမူ ပပျောက်ရေး အတွက် ငွေစုငွေ ချေး အသင်းများတည်ထောင်ရန် ကြေငြာ ထည့်သည်ကိုတွေ့ လိုက်ရသည်။ လိုအပ်သလို ကူညီမည်ဟုလည်းရေးထားသည် ။ တစ်ကယ်လော အမှန်လော ခွဲ ဝေရန်ခက်၏ ။ပကတိ နိုင်ငံ ရေးမှာ အသွင်သဏ္ဍန်နှစ် အနှစ်သာရ ကွာခြားနေသော နိုင်ငံရေးဖြစ်သောကြောင်း နားလည်းရန်ခက်ခဲလှပေစွ တကား။
Labels: wai lin aung, ကိုဧည့်သည်
ဦးလှအောင် သား မှတ်ပုံတင်မရသေး ထို့ ကြောင့် အလုပ်လျှောက်မရသေးချေး မှတ်ပုံတင်ငှားလိုသည်တဲ့။ ရေးရအုံးမည့်စာများ။
ငွေစုငွေချေး မှတ်ပုံတင် လျှောက်မရပါ လျှောက်ထားလို လျှင် ပါတီနိုင်ငံ ရေး ကင်းရန်လိုသည်တဲ့။ 24 ရပ်ကွက် ဒဂုံတောင် မှ ထောက်ခံချက်မပေးပါ။
သစ်ဝယ်လျှင် 3x1 သုံးချောင်းပူတိုင်း 3x2 ရသည်.
ပြောရရင် ဖြင့် နိင်ငံသားတို့ ၏ မူလ ရပိုင်ခွင့်
အခြေခံဥပဒေ အခန်း၈ တွင် နိုင်ငံသားတို့ မူလတာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဝေ ဖြန့် ချီ
ဈေးထဲက အဖြစ်အပျက် ငါးသားပုဇွန်ရှားပါးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်လျှော့ တိုက်ခြင်း ငါးသေးငါးနုတ် အကုန်ဖမ်း။အပေါ်ပြောင်းသော်လည်းအောက်ခြေမပြောင်းသေး
ဒါတွေ ရေးရအုံးမည် လိုင်းတွေက မကောင်းသေး ။
Posted by Wai Lin Aung at 7:13 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:28 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Poems
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Poems: သူငယ်ချင်း မောင်မိုးသူ (မောင်မိုးသူ အသက် ၆၀ ပြည့် မွေးနေ့တုန်းက အပယ်ခံကဗျာ) မောင်စွမ်းရည် စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၁ သူ့မွေးနေ့ ၆၀ ပြည့်မှာ ...
Posted by Wai Lin Aung at 8:28 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Articles
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Articles: တင်မိုးရဲ့ ဂီတ၀ါသနာ မောင်စွမ်းရည် ဇန်န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ တင်မိုးရဲ့ ကဗျာတွေကို ဝေဖန်ရာမှာ သူ့ကဗျာတွေက “အသံချိုတယ်။” “ပြေပြစ်တယ်။” “ဂီတအသံပါတ...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Poem: ဂဒါဖီ သံဝေဂ မောင်စွမ်းရည် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၁ အာဏာရှင်အပေါင်း သူတို့ဦးခေါင်းမှာ ရွှေသရဖူဆောင်းတော့ ခေါင်း ၁၀ လုံးမရှိ၊ ရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့...
Posted by Wai Lin Aung at 8:13 AM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Articles: တော်လှန်သော သတင်းစာဆရာ - ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် မောင်စွမ်းရည် မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၁၂ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက “စာပေ” ရှိတာကို ဘယ်လိုများစတင် သတ...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Poem: ဒီဇင်ဘာ ၃ မှာ အသက် ၉၂ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောသို့ ဂါရ၀ကဗျာ မောင်စွမ်းရည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁ “တော်လှန်ရေး” “လွတ်လပ်ရေး” “...
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Maung Swan Yi - Articles: ရဟန်းတော်များနှင့် နိုင်ငံရေး မောင်စွမ်းရည် မတ်လ ၅၊ ၂၀၁၂ ဒီနေ့ ကျနော်ပြောမှာကတော့ ရဟန်းတော်များနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးတအုပ်အ...
Nay Myo Aye – မ အ အောင် သမိုင်းသင်မိသူ
မသွားခင်က ရောက်နှင့်သည် လို့ပဲ ဆိုပါရစေတော့။
သို့ သော် အမေ့နောက်က လိုက်နေသော ပြည်သူလူထုထဲမှာ အသိမဲ့ ပြည်သူ တွေ ဘယ်လောက်များများ ပါနေမလဲ ဆိုတာ သားသိချင်ပါတယ် အမေ။ အမေကို ယုံပေမဲ့ အမေ့နောက်က ရဲဘော် ရဲ့ဘက်တွေ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည်ဝဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ အမေလည်း သိမှာပါ။
ိနိူင့်ငံသားအားလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်ဝဖို့ကို နိုင်ငံသားများဖြစ်တဲ့ အမေ့ရဲ့သားတွေ တာဝန်ပါပဲ။
အမေ့ ရဲ့ သားတွေ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိခဲ့ရင်
နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်တွေကို အမေတစ်ယောက်တည်း ဘယ်လိုထမ်းဆောင်မှာလဲ ဆိုတာ ကိုလည်း သိချင်မိတယ်အမေ။
အမေ့ရဲ့ ဇွဲ လုံးလ နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံမှု ကို သားတို့ သိပါတယ် အမေ.။ အမေ့ သားတွေ ကိုလည်း အမေ့လို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံသူများ ဖြစ်ပါစေလို့သာ သား ဆုတောင်းနေပါတယ်အမေ။
Posted by Wai Lin Aung at 9:02 AM
make money: အဘတို့ဘက်က ငြိမ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
make money: အဘတို့ဘက်က ငြိမ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?: အဘတို့ဘက်က ငြိမ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
Posted by Wai Lin Aung at 8:30 AM
အဘတို့ဘက်က ငြိမ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ ?
Posted by Wai Lin Aung at 8:21 AM
Labels: aung lin wai
Posted by Wai Lin Aung at 7:36 AM
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းသို့ စည်းရုံးရေးခရီး
Posted by Wai Lin Aung at 7:14 AM
၀န်ကြီးဌာနတွေ လာဒ်စားမှု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပြသွားမည်
Posted by Wai Lin Aung at 8:18 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:57 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:50 AM
၀န်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်သောင်းနဲ့ ဘီလီယံဒေါ်လာ ပိုင်ဆိုင်မ
Posted by Wai Lin Aung at 7:43 AM
အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ရဲဝံ့စွာလာရောက်ပြီး၇င်ဖွင့်တဲ့ စစ်သားလေး (ရုပ်/သံ)
အမေစု ကို အားမနာတမ်းခိုင်းစားနေကြသည်။ အသက်အရွယ်အရ အနားပေးသင့်သည်။ ကြာကြာစားမဲ့သွား အရိုးကြည့်ရှောင်သင့်သည်။
အမေက လည်း သားသမီးများ ကို အလိုလိုက်လွန်းသည်။ အမေ့ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်မချ ရသဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။
အားလုံးက နားလည် နိုင်ကြပါစေ.
ဘွဲ့ရ အလုပ်လက်မဲ့ လူငယ်များအဖွဲ့
ဘွဲ့ ရ ပညာမတတ် လူငယ်များအဖွဲ့
ဘွဲ့ရ ဘာမှမသိ အသင်း
ဘွဲ့မရ အလုပ်မရှိလူငယ်များအသင်း စသော အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ လူအဖွဲ့အစည်းများ ကို တည်ထောင်ရန် လိုအပ်သည်နှင့်အညီ အာဏာရပါတီအနေဖြင့် ဆောက်ရွက်ရန်ရှိသော လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးမှ အစပြုလျက် လူငယ်ထု တစ်ရပ်လုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အတူ အသွင်သဏ္ဍာန် နိုင့်ငံရေးမှသည် အနှစ်သာရရှိသော နိုင်ငံရေးကိုဖော်ဆောင် နိုင်စေက...ာ နိုင်ငံတော်လည်းပန်းတိုင်ရောက် နိုင်ငံသားများလည်း ပန်းတိုင်ရောက် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားလဲ ပန်းတိုင်ကို ကျော်ပြီးသကာလ ( မှတ်ချက် သမတကြီးမိန့်ခွန်းကို မှီငြမ်းသည်) ( သမတကြီးသည် မည်သူ့ဆီက မှီးသည်ကိုမူကား မသိချေ) သာယာချမ်းမြေ့သောလူဘောင်သစ်ကြီးဆီသို့ ချီတက်ရှေ့ရူနိုင်စေပြီးနောက် အလုပ်လက်များကို လျော့ချပေးစေနိုင်သည့် မူဝါဒမျာကို ချမှတ်စေ လျက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်သော အစိုးရသစ် ကြီး အဖြစ် အိမ်မက်မက်နေကြသူများ .
Posted by Wai Lin Aung at 7:29 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:26 AM
့how to make money?
Think about the origins of Online TV. With
Internet TV you are able to watch channels on the number of
with the right device you can transfer films and shows
or wireless online connections and well constructed electronics,
you can even connect to TV on personal PDA.
Looking for webpages that offer internet television is very simple.
intoasearch bar and you will come up with thousands of results to pick from. Most online TV broadcasting
web sites even show channels international
so shows from other countries like Canada,
opportunities that online TV offers,
it's no wonder more and more consumers are turning to it over regular TV.
offers users the ability of various stations to watch.
You can choose comedy or sport channels that may want to view.
earn 2% daily and 60% per month usea10$ free coupon to start wining some extra every day
Posted by Wai Lin Aung at 7:05 AM
ဒီမိုဝေယံ: အရောင်ပြောင်းသော လူလည်ကြီးများ အပိုင်း(...
ဒီမိုဝေယံ: ဒီပဲယင်း တရားခံ စက်မှု(၁) ဝန်ကြီးဦးအောင...
ဒီမိုဝေယံ: သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြ...
ဒီမိုဝေယံ: သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင် ကြံခိုင်ေ...
မန္တလေး ကြံ့ဖွံ့ တဦး ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဒေါ်စု ဓါတ်ပုံ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုတ်ခတ်ရေးသားထားသောစာများ ပု...
၀န်ကြီးဌာနတွေ လာဒ်စားမှု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ...
တံတားနီ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား.ဒေါ်အောင်ဆ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဌာနများ၏ မသမာမှုများနှင့် လိမ်လ...
အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ရဲဝံ့စွာလာရောက်ပြီး၇င်ဖွင့်တဲ့ စ...